Indlela iJografi ifaka ngayo i-US Weather Weather
Ikhono elibalulekileyo lokufunda indlela yokufunda imephu yemozulu ifunda yakho geography.
Ngaphandle kwejografi, kuya kuba nzima ukuxoxa ngumoya wemozulu! Akukuphela nje ukuba akukho ndawo engabonakaliyo yokuthetha ngesimo sesiphepho kunye nomkhondo, kodwa akuyi kuba neentaba, ulwandle okanye ezinye iindawo zokubambisana kunye nemozulu yemozulu kunye nesimo sezulu njengoko ihamba kwindawo. (Olu lwakhiwo-mhlaba womoya-moya luyaziwa ngokuba yi- mesoscale meteorology.)
Makhe sihlolisise imimandla yase-US esoloko ikhankanywe kwiingxelo zemozulu, nendlela amahlaba azo afaka ngayo isimo sezulu esizibonayo.
Ummandla wePacific Northwest of US USDA
Amazwe: Oregon, Washington, Idaho, iphondo laseKhanada yaseBritish Columbia
Ngokuqhelekileyo kuqatshelwa kwiidolophu zaseSeattle, ePortland, naseVancouver, iPacific North-West iya kwilizwe lasePacific Coast ukuya kwiMpuma yeRoyy . Udidi lweNtaba yeCascade luhlukanisa ummandla kwiinkqubo ezimbini zemozulu - enye inxweme kunye nelizwe elilodwa.
IWest of the Cascades, ininzi yomoya opholileyo, umoya omanzi uhamba ngokukhululekile ngaphakathi kwi-Ocean Ocean. Ukususela ngo-Oktobha ukuya ku-Matshi, umlambo we-jet uhambelana ngokukodwa kule ngqungquthela yase-US, iqhubhisa iziphepho zasePacific (kubandakanywa ne-Pineapple Express). Ezi zinyanga zibhekwa njengesihlandlo "semvula," xa ziphantse ukuba zibe zimbini zesithathu.
Ummandla osempuma weCascades ubizwa ngokuba yi- Pacific North-North . Apha, amazinga okushisa anyaka kwaye ahlukahlukeneyo ahlukeneyo, kwaye ukuchithwa kuphela kwincinci yecala elibonwe kwicala elingenomoya .
I-Basin Great & Intermountain West
Ummandla we-Intermountain West we-US USDA
Amazwe: Oregon, eCalifornia, i-Idaho, i-Nevada, i-Utah, iColorado, i-Wyoming, i-Montana, iArizona, iNew Mexico. I- "Corner Four" ifakiwe.
Njengoko igama layo libonisa, lo mmandla uphakathi kweentaba. AmaCapecade neSierne Nevada amaketanga ahlala ngasentshonalanga, kwaye i-Rocky Mountains zihlala ngasempumalanga. Iquka indawo ekuMmandla oyiNtloko, eninzi yintlango ngenxa yokuba ilele kwicala le-Sierra Nevadas neCascades elivimba izivunguvungu ze-pacific ukususa ukungcolisa khona.
Iziqephu zaseNtshonalanga zase-Intermountain ziquka ezinye zeendawo eziphakamileyo eziphakamileyo. Uyakuvame ukuva malunga nale ndawo eneziqhamo zokuqala zekhephu zokuwa kunye namaxesha ebusika. Kwaye ebudeni, iqondo lokushisa kunye neziphepho ezinxulumene neNorth American Monsoon zidla ngoJuni noJulayi.
Ummandla oMmandla oyiNtlanzi we-US USDA
I-States: I-Colorado, iKansas, i-Montana, i-Nebraska, iNew Mexico, eNorth Dakota, eMzantsi Dakota, e-Oklahoma, eTexas, e-Wyoming
Eyaziwa ngokuba yi "intliziyo" yaseUnited States, amaThafeni amakhulu ahlala ngaphakathi kwintlanga. Iintaba ze-Rocky zilele kumda walo osentshonalanga, kwaye indawo eninzi yolwandle isondela empuma kuMlambo wase-Mississippi.
Idumela lommandla womoya omile oza kuhlaselwa ungachazwa ngokulula ngemeteorology. Ngethuba lomoya olumanzi olushushu luvela emanxwemeni luwela iRockies kwaye lusehla empuma kubo, lomekile ukuba lube lukhuni ngokuphindaphindiweyo lwamanzi; Kufudumele ukusuka ekunciphiseni (kucindezelwe); kwaye ihamba ngokukhawuleza ekubeni iqhutywe phantsi entabeni yentaba.
Xa lo moya oomileyo uxabana nomoya othuthuzelayo ojikelezayo uvela phezulu kwiGulf of Mexico, ufumana esinye isiganeko amaLwandle aPhambili adume ngokuba: iziphepho.
I-Mississippi, iTennessee, ne-Ohio Valleys
Iindawo zaseMississippi, eTennessee, nase-Ohio Valley ze-US USDA
Amazwe: Mississippi, Arkansas, Missouri, Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Tennessee, Ohio
Ezi zilambo zintlambo zintlambo ziyingxenye yendibano yentlangano yemimoya evela kwezinye iindawo, kuquka umoya we-Arctic waseKhanada, umoya ophantsi wasePacific ovela eNtshonalanga, kunye neenkqubo ezinobuncwane ezinobuncwane ezikhuphuka kwiGulf of Mexico. Ezi zihlwele zomoya zikhokelela kwiziphepho ezinzima kunye neenkanyamba ezinyangeni zentwasahlobo nasehlobo, kwaye zijongene neempuphu zamanzi ngexesha lebusika.
Ngexesha leqhwithi lenkwenkwezi , izihluthulelo zesiphepho zihlala zihamba apha, zizisa ingozi enkulu yokukhukula kwemlambo.
Isiqendu samaLwandle aMandla ase-US USDA
Amazwe: eMinnesota, eWisconsin, e-Illinois, e-Indiana, e-Ohio, ePennsylvania, eNew York
Ngokufanayo kwintlambo ye-Valley, i-Great Lakes esifundeni yindlela ehamba phambili yomoya ovela kwezinye iindawo-okuyi-air arctic evela eKhanada kunye nomoya omanzi oshushu ovela eGulf of Mexico. Ukongezelela, amachibi amahlanu (u-Erie, Huron, eMichigan, i-Ontario, kunye noPhezulu) apho ummandla ogama luthiwa ngumthombo wokungcola. Ngethuba leenyanga zasebusika, bangela ukuba iziganeko ezinkulu zeqhwa eziqhamuka kwiindawo ezikhethiweyo zibizwa ngokuba yikhefu .
Ummandla wase-Appalaki we-US USDA
Amazwe: eKentucky, eTennessee, eNorth Carolina, eVirginia, eWest Virginia, eMaldin
Iintaba ze-Appalachian zisezantsi ntshona ukusuka eCanada ukuya ephakathi kweAlabama, kodwa igama elithi "Appalachians" ngokuqhelekileyo libhekisela kwintambo yentaba yaseTennessee, eNorth Carolina, eVirginia naseWest Virginia.
Njengaye nayiphi na intambo yeentaba, amaApalaki aneempembelelo ezihlukahlukileyo kuxhomekeke kwicala lawo (i-winward okanye i-leeward) indawo ekhoyo. Kwiindawo ezisempumalanga, okanye entshona, (njengaseMpumalanga Tennessee) ukunyuka kwezulu kunyuke. Ngokuphambene noko, indawo e-lee, okanye empuma, okanye intaba yeentaba (ezifana ne-North North Carolina) ifumana iimali zokukhawuleza kweemvula ngenxa yokufumaneka kwisithunzi somvula .
Ngeenyanga zasebusika, iintaba ze-Appalachian zenza igalelo kwiimeko ezizodwa zemozulu ezifana nokulimala komoya okubanda kunye nomntla-ntshona (upslope).
I-Mid-Atlantic neNew England
Imimandla yaseMiddle Atlantic neNew England ye-US USDA
Amazwe: iVirginia, iWest Virginia, i-DC, i-Maryland, iDelaware, iNew Jersey, eNew York, ePennsylvania; Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont
Lo mmandla uthinteke kakhulu kwi-Atlantic Ocean, ephethe umda wasempumalanga, kwaye ungasentla. Iziphepho zamanxweme, njengama- norasters kunye nama-cyclone e-tropical, zichaphazela rhoqo kwi-Northeast, kunye neengxelo zeengozi zemozulu ezisemaphandleni - iziphepho zasebusika kunye nezikhukhula.
Ngoko, Ngaba ufuna i Telescope?
Uluhlu lweMetals and Properties
IsiGwebo esiPhakamileyo Inkcazo kunye nemizekelo
Iingoma ezili-10 zothando zoLonke ixesha
Amathambo aseMerika okuThathulwa
Indlela yokudibanisa iNkcubeko yeBhakteria